IMF Oo Shaacisay In Saamayn Ba’an Uu Dhaqaallaha Somaliya ku Yeeshay Covid 19. – Heemaal News Network
Koox shaqaale ah oo ka socota Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF), oo uu hoggaaminayo Allison Holland, ayaa wada-hadallo la yeeshay mas’uuliyiinta Soomaaliya intii lagu guda jiray howlihii billowga ahaa laga bilaabo Sebtember 12 – 22, 2020 oo ku saabsanaa dib-u-eegistii ugu horreysay ee barnaamijka dib-u-habeynta dhaqaalaha Soomaaliya.
Intii lagu gudajiray nuskii hore ee sanadka 2020, Soomaaliya waxaa soo foodsarey dhibaatooyin badan – daadad, ayax , iyo cudurka faafa ee adduunka ee coronavirus.
Kuwani waxay sii xumeeyeen caqabadaha bani’aadamnimada, waxayna saameyn taban ku yeesheen dhaqaalaha iyo awoodda dowladda ee ah inay abaabusho dakhliga gudaha.
Masuuliyiintu waxay qaadeen tillaabooyin dhowr ah si loo yareeyo saameynta ay ku reebtay dhibaatooyinkan dadka Soomaaliyeed iyo dhaqaalaha.
Dadaalladan waxaa hoosta ka xariiqay taageero muhiim ah oo ka timaadda bulshada caalamka waxaana ka mid ah ka-dhaafista canshuuraha ku-meel-gaarka ah ee qaar ka mid ah badeecooyinka aasaasiga ah ee cuntada; soo bandhigida nidaamka xawilaadda lacagta ee loogu talagalay kuwa ugu nugul, Baxnaano; iyo daahfurka xarun amaah ah, Gargaara, oo loogu talagalay shirkadaha yaryar, iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Inkasta oo ay jirto xiisadda, mas’uuliyiintu waxay sii adkeeyeen ballanqaadkoodii xoogga badnaa ee dib-u-habeynta dhaqaalaha waxayna sameeyeen horumar lagu qanco oo ku saabsan hirgelinta siyaasadaha muhiimka ah ee hoos yimaada Barnaamijka Dheef-siinta Dheeraadka (ECF), iyagoo taageeraya heshiis heer shaqaale ah oo ku saabsan dhammaystirka dib-u-eegista koowaad.
Dakhliga guud ee kasoo xarooda gudaha ilaa iyo bishii Juun ee Dowladda Federaalka Soomaaliya (FGS) wuxuu gaaray US $ 99 milyan marka loo eego bartilmaameedka barnaamijka oo ahaa US $ 109 milyan. Mas’uuliyiintu waxay ka codsan doonaan ka-dhaafidda Guddiga Fulinta ee IMF QPC-ga la seexiyay iyadoo lagu saleynayo tallaabooyinka la qorsheeyay si loo hubiyo in dakhliga gudaha uu soo kabsado sannadka 2021.
Liverpool Oo Gumaadday Lincoln Iyo Man City Oo Dirqi Kaga Baxsatay Bournemouth